Nofeembar | 2014 | marqaati
Arkiifiyaha Billaha: Nofeembar 2014
Musuq Maasuqa Garsoorka Soomaaliya
Garsoorka in kastoo uu yahay hay’ada ugu muhiimsan ee isla xisaabtanka dawlada, kaasi oo Soomaalidu ka rajeynayaan in ay keento iyo xasiliso degenaanshaham, wuxuu Garsoorka maray is bedel yar ee anan saameeyn laheyn ka hor iyo kadib dhamaadka xiliga ku meel gaarka ah.
Eedeeymo ballaadhan ee kuu aadan musuq maasuqa iyo maamul darida Garsoorka awgiis bay hay’ada marqaati go’aansatay in ay baarto garabkan muhiimka ah ee dawlada si loo ogaado xaalada hada taagan, iyo in loo isticmaalo natiijada baaritaankan in loogu doodo isbedelo xaga Garsoorka.
Natiijada wuxuu cadeynayaa in Garsoorka uu yahay hay’ad tabar yar ee aanan la ixtiraamin madaxbanaanideeda.
Si aan u qiimeeyno heerka uu gaarsiisan yahay musuq maasuqa garsoorka, waxaan isticmaalnay Diagnostic Checklist for Assessing Judicial Corruption kaasi oo ay diyaariday Transparency International lagana heli karo buuga la yiraahdo Combating Corruption in Judicial Systems. Su’aalaha aan isticmaalnay wuxuu ku liifaqanyahay qeybta Appendix-ka ee baaritaankan.
Waxaan eegnay dokumentiyada ay quseyso sida Dastuurka Ku-Meel Gaarka ee Soomaaliya, xeerka anshaxa garsoorka, iyo go’aamo dhowaan ay gaareen garsoorka. Intaasi waxaa dheer, waxaan wareysanay shaqaalaha Garsoorka iyo 30 ka mid ah dadweynaha isticmaalayay maxkamadaha inti u dhaxeysay Feb-Apr 2014 iyo Jul-Sept 2014.
Caqabada ug weyn waxay aheyd taageero maaliyadeed ee anan ku filnayn qeybta wareysiyada ee baaritaankan. Waxaa si buuxda u maal galiyay xubnaha hay’adan.
Caqabad kale waxay aheyd xaalada nabadgelyo kaasi oo keenay in dad badan ee maxkamadaha isticmaalayay aysan aqbalin in la wareysto.
Waxyaabaha la arkay
Madaxbanaanida Garsoorka waa mid ku cad dastuurka, lakin lama dhaqan geliyo.
Garsooreyaalka iyo shaqaalaha kale ee garsoorka malahan xaalado wanaagsan ee shaqo, taasi oo keeni kara in ay u nuglaadaan laaluush iyo hanjabaado.
Shaqaaleeynta Garsooreyaalka ma aha mid furfuran, taasi oo keenta in dad aanan u qalmin ama karti u laheyn ay shaqada qabtaan.
Geedi socodka maamul ma aha mid wanaagsan kaasi oonan xaqiijinayn in Garsooreyalka loo magacaabo qaab aanan cid u xaglin laguna qorin meel ay siyaasiyiinta jooga xiriir la leeyihiin.
Ma jiro la xisaabtan xaga maaliyada ee Garsoorka.
Garsoorka ma soo saaro daabacaad cadeynaya miizaaniyadiisa ama lacagta uu bixiyo sanadki.
In kastoo Garsooreyaalka loo maxkamadeyn karo anshax dari sida musuq maasuqa, tani ma aysan dhicin xiligii ku meel gaarka iyo kadib in kastoo ay jiraan cabashooyin aad u badan ee musuq maasuqa garsoorka.
Garsoorka wuxuu leeyahay furfurnaan aad u yar; ma jirto macluumaad ku aadan qaabka garsoorka loo xulo iyo shaqaaleyntooda.
Waxbarashada xaga Garsoorka waa mid aad u liidato, iyadoo Garsooreyaal badan aysan laheyn waxbarasho rasmi ah ee xaga Garsoorka.
Ma lahan xubnaha Garsoorka damaanad xaga amaanka ah, hadii laga reebo qaar ma kid ah Maxkamada Sare. Tani waxay keentay in Garsooreyaal iyo Qareenada dadka difaaco qaarkood loo hanjaba ama xitaa la dilo.
Maxkamadaha rayidka waxay diidaan in ay qabtaan kiisaska la xiriira argagixisada iyaga oo ka cabsi kabo aar gudasho.
Booliska iyo hayadaha kale ee fulinta sharciga si buuxda uma fuliyaan awaamirta maxkamadaha; mararka qaar waxay si buuxda u inkiraan maxkamadaha.
Dhiibida laaluushka waxaa uu nooqday mid iska caadi ah qaasatan kiisaska madaniga ah. Tani waxay keentay in mararka qaar hal Garsoore uu bixiyo labo xukun ee iska soo horjeeda oo hadane hal kiis ah.
Garsoorka wuxuu loolan xaga awooda kula jiraa qeybta fulinta ee dawlada isaga oo diidan in isbedelka baahida loo qabo lagu sameeyo nidaamka Garsoorka iyo Golaha Garsoorka.
Qeybta fulinta dawlada si buuxda uma fuliso go’aamada garsoorka, waxayna soo fara gelisaa geedi socodka Garsoorka.
Qeybta Fulinta ee dawlada wuxuu ka saaraa Garsooreyaalka shaqada isaga oonan raacin nidaamka u yaala Garsoorka. Tusaale ahaan, 21 Garsooreyaal baa dhawaan madaxweynaha shaqada ka eryay – tallabadan waxaa sharci daro ku tilmaamay gudoomiyaha maxkamada sare.
Gudoomiyaha maxkamada sare ma aqoonsana Xeer Ilaaliyaha Guud, isaga oo diidan qaabka shaqada loogu dhiibay.
Qareenada qaar baa ku lug leh laaluushida Garsooreyaalka.
Dhamaan dadki isticmaalayay maxkamadaha ee la su’aalay baa aqoonsaneyn sharciyada maxkamadaha; waxey xusayaan cadaalad dari iyo musuq maasuq in ay yihin sababaha aysan ku ixtiraamin maxkamadaha.
Suxufiyiinta Soomaaliyeed kama soo waramaan arrimaha musuq maasuqa Garsoorka sida ay uga qaramaan musuq maasuqa hay’adaha kale ee dawlada.
Waxaa yar rabitaanka Bulshada Rayidka Soomaaliyeed ee ka hadlida musuq maasuqa Garsoorka. Sidaasi darteed dooda dadweyne ee musuqmaasuqa Garsoorka waxaa ka badan mida Fulinta iyo Baarlamaanka.
Taagerida bulshada caalamka ee isbedelka Garsoorka Soomaaliya aad buu u liitaa.
Waa in la dhameystiraa heykalka maxkamadaha, taasi oo ay ka mid tahay aas aasida maxkamada dastuuriga.
Waa in madaxbanaanida Garsoorka oo ku xusan dastuurka ay ixtiraamaan faracyada kale ee dawlada.
Go’aamada Garsoorka waa in ay si buuxda u fuliyaan hay’adaha fulinta sharciga.
Shaqaaleynta Garsoorka waa in uu ahaadaa mid furfuran oona ku dhisan qiimaha dadka la shaqaaleynayo.
Garsooreyaalka waa in ay helaan tababar joogto ah ee xaga qiimeeynta sharciga, qorida xukunada, maamulida kiisaska, iyo la dagaalanka musuq maasuqa.
Waa in xaaladaha shaqo ee Garsooreyaalka iyo shaqaalaha kale ee garsoorka la wanaajiyaa. Waa in loo wanaajiyaa mushaarka iyo damaanada xaga amniga.
Hay’ada shaqaalineysa xubnaha Garsoorka waa in ay ka madax banaanaataa faracyada dawlada ee Fulinta iyo Baarlamaanka.
Waa in damaanad shaqo la siiyaa Garsooreyaalka u qalma eel eh waxbarasho heer sare ah iyo hawl karnimo.
Eryinta Garsooreyaalka waa in ay ahaataa mid lagu sameeyo geedi socod furfuran ee cadaalad ku dhisan.
Waa in la sameeyaa nidaam si qarsoodi leh lagu soo sheegi karo anshax dari ama musuq maasuq oo ay la kacaan Garsooreyaal, Qareeno, ama shaqaalaha kale ee maxkamada.
Garsooreyaalka waa in ay si joogto ah u cadeeyaan maalkooda iyo xaga ay ka keeneen.
Garsooreyaalka leh arrimo is khilaafka xaga danaha (Conflict of Interest) waa in ay iska saaraan qabashida kiisaaskaas ama uu ka saaraa Golaha Adeega Garsoorka.
Mabaadi’ida Bangalore Principles of Judicial Conduct waa in la dhaqan geliyaa so nidaamka cadaalada garsoorka Soomaaliya oo u noqdaa mid la socda heerka caalamiga ah.
Hay’ada Garsoorka waa in uu daabacaa sanadle xusayo shaqada uu qabtay iyo lacagta ku baxday.
Hay’adaha Bulshada Rayidka waa in ay ka qeyb qaataan la lsocodka Garsoorka si ay u soo sheegaan dhacdooyinka musuq maasuqa.
Aqoonyahanada Soomaaliyeed waa in ay ka ra’yi bixiyaan xukunada ay ridaan maxkamadaha si dadweynaha ay u fahmaan shaqada maxkamadaha.
Waxaa qormadaan lagu xereeyey Marqaati mark’ay ahayd Nofeembar 6, 2014 uu qoray Maxamed Mubarak.